संसारका सबभन्दा धनी अम्बानीको कसरी सकि'यो सम्पत्ति, गहना सबै बेचियो, पकेट खर्च श्रीम'तिबाट ! - Onlines Time
November 20, 2020 November 20, 2020 by onlinestime
कुनै समय संसारका सबभन्दा धनी व्यापारीमध्ये एक मानिन्थ्यो अम्बानी परिवार ।
त्यहि परिवारका एक सदस्य अनिल अम्बानी आफै बेलायतको एक अदालतको कठाघरामा उभिएका छन अहिले । अनिल अम्बानीले चिनियाँ बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनी वेलायतको अदालत समक्ष उभिएर भने साधारण जीवन बिताइरहेको छु ।
Prevमकवानपुरमा पूर्व आर्मीको कसले लि’यो ज्या’ न ? श’ व अन्त्यष्टि गरिसकेपछि खुल्यो यति ठूलो र’ हस्य (भिडियो हेर्नुस्)
Nextअचा* नक प्रचण्डले गरे यति ठु’लाे नि’णय,केपि ओलिकै का’रण पार्टि छाड्दै,ओलि लाई हुने भयो मा’लामाल हेर्नुस